Maxay salka ku hayaan mudaharaadyada dib uga qarxay dalka Masar? - Horseed Media
Maxay salka ku hayaan mudaharaadyada dib uga qarxay dalka Masar? November 22, 2011 Share this:FacebookTwitterGoogleQaahira iyo sida ay ahayd maalintii Isniita
Caasimadda dalka Masar ee Qaahira iyo meelo kale oo kamid ah Masar waxaa dib uga qarxay mudaahaaraadyo rabshado wata, Ciidanka amaanka ee dalka Masar ayaa awood kala hortegey kuwa mudaaharaadyada wada, waxaa dhintey dad kor u dhaafaya 30 qof dhaawacuna waa mid aad u badan, waxaa dab la qabadsiiyey meelo badan oo ka mid ah Qaahira. Xukuumaddii dalka Masar ayaa iyaguna is wada casiley maalintii shalay, Ciidanka Mileteriga ee ka taliya dalkaas waxay kacdoonka labaad ee rabshadaha wata ku eedeeyeen Gacmo shisheeye in ay ka danbeeyaan, halka Amnesty International ay ku sifeysey xaaladda Masar 9-kii bilood ee u danbeeyey mid ka xun waqtigii Mubarak. Waxaa la isweydiinayaa waxa ay salka ku ahayaan mudaaharaadyada dib uga qarxay Masar kadib markii la ridey keligii taliyihii dalkaas mudada dheer ka talinaayey Xusni Mubarak.
1. Maxay ka tarjumayaan mudaharaadyada ka soconaya Masar?
Isbedelka siyaasadeed ee dalka Masar ee sida tartiibta ah ku socda ama ma gudbaha ah ayey dadka badankood ka niyadjabsan yihiin. Qiyaastii sagaal bilood ayaa ka soo wareegay, markii lagu khasbey Madaxweynihii dalkaas Xusni Mubarak in uu xukunka isaga dego, mudaaharaadyo aad u xoogbadan markii lagala hortegey. Kadib markii xukunka laga tuurey Mubarak waxaa talada dalka la wareegay kooxda u saraysa Mileteriga dalkaas, taas oo loogu yeero Golaha sare ee ciidanka qalabka sida (SCAF), waxayna soo dhiseen xukuumad kumeel gaar ah. Dadka mudaaharaadaya waxay rabaan isbedel deg-deg ah, in laga baxo talada mileteriga, loona wareejiyo Masar dawlad rayid ah iyo madaxweyne shacabku soo doortey.
2. Wareega kowaad ee doorashada Baarlamaanka oo soo dhaw?
Baahida loo qabo doorasho ayaa kor u qaadey xaraarada siyaasadeed ee dalka Masar. Wareega kowaad ee doorashada Baarlamaanka ayaa la qorsheeeyey in ay dhacdo maalinta Isniinta ah ee todobaadka soo socda 28.11.2011. In badan oo kamid ah dadka Masar kuma qanacsana qaabka doorashada loo wado in ay u dhacdo, Wax ka yar lix wareeg oo doorasho ah ma dhacayso lamana aqbalayo sida Mileterigu qabo, Golaha Sare ee Ciidanka Qalabka sida waxay sheegeen in aysan aqbalayn in ay yimaadaan Ajaaniib, ka socota dalal shisheeye oo doorashada goobjoog u noqota, taas oo kor u qaadey in la doonayo doorasho musuqmaasuq iyo kushubasho ah in ay dhacdo.
3. Yaa kadanbeeya dadka Mudaaharaadka wada?
Kooxaha afkaarta Islaamka aaminsan ayaa ka soo horjeeda qorshe la soo jeediyey kaas oo kor loogu qaadayo awoodda Mileteriga ee dalkaas, kuwaas oo dadka ku dhiiriyey in ay ka horyimaadaan qorshahaas, Waxaa hadda mudaaharaadyada ka qaybqaadanaya, dadka loo yaqaan Isdirayaal “Activist”, kuwaas oo ahaa kuwii ku khasbey Mubarak in uu kursiga isaga dego.
4. Maxaa dadku uga shakisan yahay Mileteriga?
Golaha sare ee Miletriga waxaa hoggaamiya Marshal Xusseyn Dhantawi, kaas oo ahaan jirey wasiirka difaaca tan iyo sanadkii 1991 ee waqtigii Mubarak, waxaana dadku aaminsan yahay in uu yahay nin wax badan kala mid ah Mubarak. Markii Golaha sare ee Ciidanku sheegeen in aan doorashada Madaxweynaha la qaban karin ka hor dhamaadka sanadka 2012, waxaa dadku aamineen in ay tahay qorshey ay talada ku adkeysanayaan Mileterigu.
5. Maxay tahay sababta Mileterigu dib ugu dhigeen doorashada Madaxweynaha?
Golaha sare ee Mileterigu waxay ku doodayaan in waqti la siiyo Baarlamaanka cusub ee la dooranayo si ay u diyaarshaan dastuur cusub kaas oo afti dadweyne lagu ansixiyo ka hor doorashada Madaxweynaha.Laakiin dadka Isdirayaalka ah iyo kuwa damaca siyaasadeed qaba waxay doonayaan in isbedelku dhakhso u yimaado maadaama dhiig badan ay u hureen in ay Mubarak meesha ka saaraan.
6. Maxay shacabku awooda u saareen Mudaaharaadyada?
Tirada dadka Masar oo gaareysa qiyaastii 82 Milyan oo qof waxaa aqlabiyadoodu tahay kuwo degan banaanka Magaalooyinka, waxaa la sheegaa in 10 qof ee qaangaar ah ee Masar saddex kamid ah aysan waxna akhrin waxna qorin. Mudaaharaadayaashu waxay awoodda saareen magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeeyaan Qaahira iyo Aleksandiriya. Baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaadey in inta badan shacabka Masar ay doonayaan deganaansho iyo kala danbeyn taas oo beddesha Mudaharaadyada iyo rabshadaha. In badan oo kamid ah Shacabka Masar waxay jecelyihiin in Masar ku soo laabato sidii ay ahayd xiliyadii Mubarak.
7. Maxaa hadda dhici kara?
Golaha sare ee Ciidanka Qalabka sida waxay ku jiraan laba daran mid dooro, waxayna marayaan waddo ciriiri ah oo mugdi gelinkarta mustaqbalka dalka Masar. Mudaaharaadyada socda waxay keensan karaan doorasho raaligelin ah oo waqtigeedi laga soo hormariyo. Laakiin go’aamada caynkaas oo kale ah waxa uu shacabka ku dhiiri gelin karaan in ay dalabadaan waxkasta oo caqiligooda ku soo dhaca iyaga oo isticmaalaya rabshado, cunfi iyo Miidaanu Taxriir, waxaana fikrika caynkan oo kale ah uu noqon doonaa mid dalal badan gaara. Waxaa la reajeynayaa in meesha ay ka muuqato siyaasad masuuliyad leh oo milterigu la yimaado iyada oo rabshaduhu keeni karaan dhibaato intaas ka sii weyn.